Isilinda esigqwesileyo se-HDPE esincinci esimnyama kunye noMvelisi | Erbo
Sizimisele ukunikela ngexabiso lokhuphiswano, umgangatho weemveliso ezibalaseleyo, kunye nokuhanjiswa okukhawulezileyo kwexabiso elisezantsi le-buoy edadayo, Kulilungelo lethu elikhulu ukuzalisekisa iimfuno zakho. Sinethemba lokuba siya kusebenzisana kunye nawe ngaphakathi kwikamva elibonakalayo elizayo.
Ixabiso elisezantsi le-buoy edadayo, Injongo yethu kukunceda abathengi baqonde iinjongo zabo. Senza iinzame ezinkulu zokufezekisa le meko yokuphumelela kwaye siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba usijoyine. Ngelinye igama, xa ukhetha thina, ukhetha ubomi obugqibeleleyo. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu kwaye wamkele iodolo yakho! Ukufumana eminye imibuzo, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
"Lawula umgangatho ngeenkcukacha, bonisa ubunzima ngomgangatho". Ifemi yethu izabalazile ukuseka abasebenzi abasebenza ngokukuko kunye nabazinzileyo kwaye bahlola inkqubo esebenzayo yolawulo olukumgangatho ophezulu kwiminyaka emi-2 yeFektri edadayo, Ngamafutshane, xa ukhetha thina, ukhetha ubukho obufanelekileyo. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu kwaye wamkele ukufumana kwakho! Nokuba ungabuza eminye imibuzo, khumbula ukuba uhlala ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Iminyaka emi-2 yeFektri yentsimbi edadayo, Sinethemba lokuba nobudlelwane bokusebenzisana kunye nabathengi bethu bexesha elide Ukuba unomdla kuyo nayiphi na into yethu, qiniseka ukuba ungathandabuzi ukuthumela umbuzo kuthi / igama lenkampani. Siqinisekisa ukuba unokwaneliseka ngokupheleleyo ngezona zisombululo zethu!
Sithatha "ukulungela abathengi, ukujonga okusemgangathweni, ukudibanisa, ukwenza izinto ezintsha" njengeenjongo. "Inyaniso nokunyaniseka" yindlela yethu efanelekileyo yokubonelela nge-buoy ye-OEM / ye-ODM edadayo, Njengokuba sisiya phambili, siyaqhubeka nokubeka iliso kuluhlu lwethu lwezinto ezithengisa impahla rhoqo kwaye siphucula iinkonzo zethu.
Ukubonelela nge-OEM / i-ODM ye-buoy edadayo, Inkampani yethu ibambelela kumoya "weendleko ezisezantsi, umgangatho ophezulu, kunye nokwenza izibonelelo ezingaphezulu kubathengi bethu". Ukusebenzisa iitalente ukusuka kumgca ofanayo kunye nokunamathela kumgaqo "wokunyaniseka, ukholo olulungileyo, into yokwenyani kunye nokunyaniseka", inkampani yethu inethemba lokufumana uphuhliso oluqhelekileyo kunye nabathengi abasuka ekhaya nakwamanye amazwe!
Egqithileyo IHDPE Isilinda esikhulu esidada emanzini
Okulandelayo: IHDPE Esincinci Isilinda Esidadayo Esilihlaza